Global Voices teny Malagasy » Planina Marshall, Haintany sy Herat · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Novambra 2017 3:17 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Miranah
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Voina
Inona no nitranga tamin'ny Planina Marshall?
Nanazava ny antony mahatonga ny drafitra Marshall ao amin'ny fireneny tsy nahatratra ny tanjony i Sanjar. Hoy izy nanoratra:
Taorian'ny fametrahana ny governemantan'ny Filoha Karzai tao Afganistana, nisy ny resaka fa ilaina ny fanatanterahana drafitra tahaka ny Planina Marshall tamin'ny Ady Lehibe Faharoa tao Eoropa. Ny zava-nitranga taorian'izay dia fampanantenana vola amina miliara dolara manoloana ny fanarenana an'i Afganistana sy ny fandaniana an'arivony tapitrisa ankehitriny ao amin'io firenena io, fa tsy nisy Planina Marshall.
Miezaka mitady vahaolana ity bilaogera ity: Tsy maintsy manome antoka i Etazonia sy ny Firenena Mikamban fa mangarahara ny fizotran'ny fanampiana an'i Afghanistan. 
Safrang kosa miresaka momba ny haintany izay namely an'i Afganistana . Nanoratra izy hoe: fanindroany tao anatin'ny folo taona latsaka, niharan'ny haintany i Afganistana. Mampitandrina i Oxfam fa olona 2,5 tapitrisa no miatrika tsy fahampiana ara-tsakafo miverimberina. Miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fiheverana iraisampirenena izy satria tsy manana fomba hiatrehana ity toe-javatra ity ny governemantan'i Afghanistan.
Nilaza i Demilitarized fa amin'ny vanim-potoanan'i Karzai ao Afghanistan, raha mitady zavatra fahiny momba ny fampandrosoana ianao- aza manalavitra an'i Herat . Nipoitra toy ny tanàna iray miaraka amin'ny firoboroboan'ny fiarahamonim-pirenena i Herat – na izy nipoitra avy any ivelany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/19/110550/
 Tsy maintsy manome antoka i Etazonia sy ny Firenena Mikamban fa mangarahara ny fizotran'ny fanampiana an'i Afghanistan.: http://sanjar.blogspot.com/2006/11/afghanistan-marshall-plan-is-without.html
 haintany izay namely an'i Afganistana: http://safrang.wordpress.com/2006/11/26/oxfam-issues-urgent-call-on-drought-in-central-afghanistan/
 amin'ny vanim-potoanan'i Karzai ao Afghanistan, raha mitady zavatra fahiny momba ny fampandrosoana ianao- aza manalavitra an'i Herat: http://warlordish.blogspot.com/2006/11/waxing-lyrically-about-herat-ismael.html#links